KHASHIFAAD: Ma dhabbaa in DFS ay xayiraadii dhanka Socdaalka ka qaaday Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur? – PuntSom – kalasoco wararka
KHASHIFAAD: Ma dhabbaa in DFS ay xayiraadii dhanka Socdaalka ka qaaday Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur?
in Wararka, Wararka Somalida April 15, 2018	24 Views
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta ka horjeeda dowlada Somalia ayaa dhowr ka bilood ka dib maanta safar ugu ambabaxay dalka Kenya.
Siyaasiga ayaa baraha bulshada soo dhigay sawir uu isaga qaaday garoonka Aadan cadde iyadoo arintan ay ka dambeysay ka dib markii dowlada federaalku ay qaaday xayiraad dhinaca safarada ah oo ay horey ugu soo rogtay Maxkamada racfaanka.
Heshiis uu ka shaqeeyay Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa lagu soo afjatay dacwadi siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame, waxaana lacag Diyo ah ay dowladda ka bixisay 6 qof oo ku dhintay weerarkii lagu qaaday Guriga siyaasiga.
Sidoo kale, waxaa guud ahaan laga noqday dacwadii lagu soo oogay siyaasigan oo aheyd qiyaano Qaran iyo inuu adeegayey dowlado shisheeye si uu uga shaqeeyo duminta dowlada Somalia.
C/raxmaan C/shakuur ayaa si weyn ugu caan baxay faafinta qoraalo ka dhan ah dowlada federaalka iyo qabashada kulamo lagu durayo madaxda dalka, isagoo dhinaca kale aanba soo hadal qaadin guulaha iyo horumarka ay dowladu ku talaabsatay.